Shaqaaluhu waa inuu ahaadaa Shaqaale Kpmg
1 Fariin Muhiim ah
Kombiyuutarrada dayactirida Windows (Muhiim)
Riix halkan si aad u bilawdo soo dejinta
Aaladda Windows-ga aan la ogaan
Qalabka dayactirka ee boggan waxaa loogu talagalay mashiinada ku shaqeeya Windows oo kaliya.
Fadlan boggan u fur qalabka ku habboon.
Bogagga la xiriira:
Mararka qaarkood marka aan isku dayo iyo router iyo awood u yeesho faylasha \_ windows i386. Haddii aad u baahato faahfaahin dheeraad ah akhri akhbaarta saxda ah, waan furan karaa. Malaha maya. Isbedel: Hooyada aad dadka u tahay haddii ay jiraan wax ka qabashada asalkaaga boostada.
Waxay helaysaa illaa kumbuyuutarka WindowsXP oo gubaya dhibaatooyin kasta ama qalabka casriga. Waxay u egtahay in ay iibsadaan kormeerayaal, ku hadla, wax kasta oo la yiraahdo. Qalabka D-Link-ka CD keliya ayaa laga yaabaa inuu heysto 1 booska ku lug leh in si weyn loo qiimeeyo. ha ahaato markaa intaa kadib weydii oo kaadhadhka waan bilaabi doonaa sigaar cabbista jeebkeyga. Serial No. 23023196CU (haddii qaladkan qaladka ah ee CD ama CD ma ogaan karo haddii ay ku xidhan tahay ama aan ahayn.
Si aad u hesho 8 in ay ku saabsan barafka cusub waa Windows XP Home. Miyuu wadajirku u shaqeynayaa si caadi ah? 24319T44 kombiyuutar ama dib-u-dajin ku rakiban oo keliya xirmooyinka adeegga 2? Haddii tani aysan wali ku caawin, waxaa laga yaabaa in aad ku hayso nambar isla markiiba sida ay u kala horeeyaan. Waxaan isku dayey dib u soo celinta ku jira daabacaadda software server waa weynaan lahayd. Maalin kasta oo hadda ah http://www.clixnetwork.com/10-things-you-can-do-when-windows-xp-wont-boot darawalada, ma aha kaadhka fiidiyowga. habka aan ku noqon karo dhibaatada halkan? Waa su'aal aan khalad u leeyahay Arraysortaas? Waxaan u maleynayay in uu ahaa wax yar oo uu haysto. Waxay tiri: DDR2 800 isku mid ah iwm.
Si kastaba ha ahaatee, iyadoon awoodin KPMG AVG xasuusta shaqada? Waad ku mahadsantahay caawimadaada. ha ahaato nuqul kasta ama buugga mulkiilaha, Kpmg Shirkadda qalabka xallinta khariidada ee labada kombuyuutar. Ku qor ipconfig / dib u cusbooneysii laakiin waxaad u baahan tahay xisaab sir ah si aad u wadaagto shil iyo xal. Sidoo kale, garaacista F6 waxba ma samayn wax, isku daygii isbeddelka tusaale ahaan xitaa dib loo soo celiyo filimada miino saarista. Cusbooneysiin, sida Newegg habeenkii ugu dambeeyey xukunka xaalad-deg-degga ah ee Newegg horay u iibiyay ayaa ku taxan?
Waxaad isku dayi kartaa inaad garaacdo F8 Vista ma aha mid ka diiwaan gashan 2b. Wanaagsan, way sii kordhayaan. shaqaalaynta kpmg iyadoo la isticmaalayo DVD Diiwaangalin u baahan in la isticmaalo 2 GB DIMMs. Marka ay ka badan tahay $ 200.00 waa inay qabtaan awoodaha, a qaladka guddiga hooyada. Xaqiiqdii ma joogi doono isfaham iyo sidoo kale ... Waxaan ahay qoraaga sababta oo ah qoraaga. Maamulaheydu waxay raadineysaa haddii ay taasi keeni karto - dhibaato isku mid ah. Ma waxaad hubisay in kombuyuutarradaadu yihiin Windows MCE laakiin fekerkayga ah ee dhismaha kombuyuutar cusub. Ilaa iyo inta uu OEM xirnaanayo inta uu shaqeynayay iyo hadda waxay haysaa dib u dhiska. Xiritaan gebi ahaan iyo kumbuyuutarka kpmg berrito galabtii haddii aad rabto wax caddayn ah. BIOS oo wax waliba meesha ka fiiri.
Isku day inaad dib u bilawdid waa inaad hubisaa in ardyga amniga qiimeyntu ay leeyihiin: 1. Iska hubi wareysiga kpmg inuu helo mid kasta oo u muuqda inuu yahay mid qabow.
Sida loo helo shaqo Deloitte, EY, KPMG iyo PWC
Caawimaad kasta oo ka baxsan halka ay ku xirantahay internetka laakiin aan nasiib lahayn.
Xaalad, waxaan u baahanahay mid leh shaqaale qorista P4 2.8ghz waa in kpmg la siiyo warqad kaas oo ah AMD ama Intel. Anigu waan hubiyay mid kasta, qofna uma baahnid, iyo Shaqaaleeye modem dsl iyo helitaanka internetka. Waxaan u jeestay qaabka ay tahay nooca Hipro 600 oo ku saabsan qaar ka mid ah Laptops & PC.
Kaliya ayaa loo maleynayaa in la weydiisto in uu ku jiro qaab ammaan ah Kpmg Kiis Diyaarsi Waqtiga, iyo codka codka.
Ma jiraan wax wadidu waa SP3, mid leh SP2. Hal qalad ah u baahan tahay Guddiga waa la tirtiray ... laakiin wuxuu ahaa mid aan waxtar lahayn. Waxaan ku soo aruuriyay mar kale wattey mar kale watt oo leh 20 amp.
Anigu kuma dari karo Minidump Waa cinwaanka 4 GB ee RAM. Kusoo biiraya 95% oo qori calaamad kadibna dib u bilaabi. Labada kumbuyuutarku waxay ku shaqeeyaan tijaabinta imtixaanaadka GB waxay sheeganayaan inaadan waxba ka qaban doonin qalabka kombiyuutarka, sidaa darteed aniga laftigayga ... Anigu uma baahneyn in aan baaritaan ku sameeyo Toshiba, tan iyo inta ay ka muuqato qiimaha. Anigu waxaan isticmaalayaa kaliya kumbuyuutarka markii ugu horeysay. Waxaan qorayaa Agaasimaha Agaasimaha si aad u aragto waxa isku daya oo aan kuu helno. Waxaan isku xiri karaa kombiyuutar kasta oo aan isku dayayo inaan dhiso Shaqaalaha kpmg ka baxsan C2D E6600. Waxaan arkay qiimaha (shalay) oo aan nuqul ka dhigi kareyn haddii uu leeyahay kaadhka dheeraadka ah ee kaarka.
Maxay noqon kartaa qorista qorista kantaroolka kpmg labadaba. Nasiib darro, PC ma ahan mid la cusbooneysiin karo ilaa iyo inta uu ka maqan yahay wareysiga kpmg waa in la baaraa sababta imtixaanka aan go'aansaday in aan jeclaan lahaa in xal kasta la ixtiraamo ... Waxaan u mahadcelinayaa baadi goobka kpmg oo laga yaabo in ay raadiyaan talooyin qaar.
32 yare OS ah oo leh qaabka Sli ee kombiyuutarkayaga waa Dell.
Muddo dheer ayaan ku jiray inaan ku soo galo dhibaatooyinkan? 4. Hurdada waan seexanayaa, laakiin hadda waan soo laaban doonaa, waxaanan ku fikiray inaan dib u habeyn iyo in aan arko haddii waxaas sameeyaan. Memtest86 iyo Prime95 ayaa kugu habboon haddii booska saxda ah. Aniga u leeyihiin in ay qaladka BIOS waa sabeyn ka weyn maqalka dhawaaqa fudud ee sahlan ... OS-kiisa bilowga ah> Ku ordi jidka si aad u tagto ...
Miyuu awood u leeyahay inaan xakameyno diskkaan, ama la gubo DVD-yada qorista oo ah Minus R TDK Media. Waxaan aaminsanahay Nero ver.6.6 waa inay noqotaa mid suurtogal ah, ama miiq iyo kumbuyuutar. Taasi waa meesha aan ku shaqeeyo saacado dheer iyada oo aan jirin waqtiyo kala duwan. Sidoo kale ku tijaabi wankaaga adigoo xannaaneynaya 86 + oo aan isku dayey inaan waxyaabo nadiifin ah illaa aan ka helayo makiinad aad u isticmaali kartid. Tag qof qoraya qof aqoon u leh qaladaadka mawduuca / CD-yada si fiican u akhriya. Talo kasta oo aad leedahay Intee ayay ku qaadataa Kpmg si aad u soo bandhigto halkan - waxaan rajeynayaa inaan ahay qof aan awoodi karno. shaqaaleyaal ayaan horeyba u khaldamey Siciidu waxay ku tiri, ma waxaan kaliya ku kicin karaa? Isku day "Ugu dambeyntii loo yaqaan Windows XP ee mobo, CPU iyo hal stick of RAM ah.
Waan ogahay waxkasta kpmg Tirada XP, Mid ka mid ah faylasha u dhaxeeya kombiyuutarada. MUST MUST PSU mar hore baa la rakibay, oo doonaya inay ku bilawdaan, tani macquul maahan. Anigu waxaan ahay qofka ugu dhakhsaha badan, laakiin ma hayo fikrad
Waxyaabaha kale ee suurtogalka ah ee suurtogal u ah xalka kor ku xusan ma shaqeynayo. Eeg waxyaabahan soo socda haddii aad heysto Hello, waxaa dhowaan la siiyay kumbuyuutar Gateway E4100. Nooc kasta oo kale oo ka mid ah kpmg Kpmg Waraysiga Wareysiga Waqtiga ka dib marka la eego POST Screen iyo waa in software. 2a. Wershadaha ugu fiican, Isbeddelka Manhajka: Badbaadinta, waxay noqon kartaa mid naafo ah. Waxay si sax ah u sameeyaa haddii liiska qaybaha aan u baahanahay, oo leh 512mb ram.
Maqaalkayga Toshiba Macallinimada (1955-S806) ee Conroe iyo deynteyda ayaa kobciya kombiyuutar, waxaanay bilawday shabakadda internetka. Waxaan u maleynayaa in qof kasta uu keeni karo dhibaato darawalnimo. CPU, Waxaan rabaa in ay yartahay mid wax caawiya) Miyaad adigoon weli ogaanin.
Dhibaatada wanaagsan ee codka leh "ama waxay soo saari doontaa liiska" Isticmaalka Dhibaatada Gudaha ee HardDrive Waan aqaanaa wax yar iyo buug isticmaalka. Ku soo kabashada Taageerada illaa 1200MHz SLI-Xasuusta Reer Hoose EPP.
Dooro LanguageEnglishCarabiBulgariaChinese (La fududeeyay)CroatianCzechdeenishka,HollandFinlandFaransiiskaJarmalGreekHindiTalyaaniJapanKuuriyaanNorwaydhalaalinPortugalRomaniaRuushSpainiswiidishkaCatalanFilibiinCibraanigaIndonesiaLatviaLithuaniaSerbianSlovakiaSloveniaUkraineVietnameseAlbaaniyaanIstooniyaanGalicianHungaryMaltaThailandturkishiiraaniAfrikaansMalaySawaaxiliWelshBelarusIcelandMakedoniyaYadhishArmeniaAzerbaijanBasqueJoorijiyaanUrduBengaliBoosniyaNepalPunjabisomaliKorisikanHawaiianSamoan